Today Bago User များအား အသိပေးခြင်း
ယခုအသုံးပြုနေသော Today Bago Version အဟောင်းတွင် ဆက်လက်တင်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် Today Bago Version အသစ်အား Download ပြုလုပ်ပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအပ်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ်မှာ ဆံပင်တွေကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ အလှပြင်ကြရင် ပျက်စီးလာတတ်ကြပါတယ်။ ဆံပင်တွေ အကျွတ်များပြီး ဆံသားကျဲလာတဲ့ အခါ ၀မ်းနည်းပြီး စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ကျွတ်သွားတဲ့ ဆံသားတွေ ကြည့်ပြီး စိတ်ရှုပ်ရပါတယ်။ ဆံသားတွေကို ပြန်ပြီး ထူလာစေဖို့ အတွက် အစားအစာတွေနဲ့ ကြိုးစားကြပါမယ်။ အုပ်စု ၄ခု ရှိပါတယ်။
၁။ ကြက်ဥနှင့် ကြက်သား
အမိုင်နိုအက်စစ်တွေက ဆံပင် သန်စွမ်းစေဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းတွေပါပဲ။ ပရိုတင်းဓာတ် များများရအောင် အသား၊ ငါး၊ ကြက်သား၊ နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ ပဲနို့၊ ဥအမျိုးမျိုး စတာတွေ စားပေးပါ။ ကြက်ဥမှာ များစွာပါဝင်တဲ့ ဘိုင်အိုတင်နဲ့ ဗီတာမင်ဘီ- ၁၂ က ဆံပင်၊ လက်သည်း၊ ခြေသည်းနဲ့ အရေပြားမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ကြီးထွားစေပါတယ်။
၂။ ငါးနှင့် အိုမီဂါ- ၃
မပြည့်ဝဆီဖြစ်တဲ့ အိုမီဂါ- ၃ အဆီတွေက ဆံပင်နဲ့ အရေပြားကို ကျန်းမာ သန်စွမ်းစေပါတယ်။ အိုမီဂါ- ၃ အဆီကို ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ ဆာဒင်းငါး စတဲ့ ငါးတွေနဲ့ သစ်ကြားသီး၊ မိကျောင်းကွမ်းဖတ်နဲ့ ပဲပိစပ်တွေကနေ များစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၃။ အမဲသား၊ ကမာကောင်နှင့် အစေ့အဆန်
အမဲသားနဲ့ ကမာကောင်တွေမှာ ဇင့်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဇင့်ဓာတ်ချို့တဲ့ပါက ဆံပင် ကျွတ်စေပါတယ်။ အစေ့အဆန်တွေဖြစ်တဲ့ ဗာဒံစေ့၊ သစ်ကြားသီးတွေကနေလည်း ဇင့်ဓာတ်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးနဲ့ သံလွင်ဆီမှာ ဗီတာမင်အီးတွေ ပါဝင်တာကြောင့် ဆံသားကို ကျန်းမာ သန်စွမ်းစေပါတယ်။
၄။ အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်
အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဖြစ်တဲ့ ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ် စတာတွေမှာ သံဓာတ်၊ ဗီတာမင်အေနဲ့ ဗီတာမင်စီဓာတ်တွေ များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေနဲ့ စီက ဆံပင်ရဲ့ အရင်းမှာရှိတဲ့ မွေးညင်းအိတ်လေးတွေကနေ အဆီတွေကို ထုတ်လုပ်ပေးပြီး ဆံသားနူးညံ့ ပျော့ပျောင်းစေတဲ့ ကွန်ဒီရှင်နာအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
ယနခေ့တျေမှာ ဆံပငျတှကေိုနညျးမြိုးစုံနဲ့ အလှပွငျကွရငျ ပကျြစီးလာတတျကွပါတယျ။ ဆံပငျတှေ အကြှတျမြားပွီး ဆံသားကြဲလာတဲ့ အခါ ၀မျးနညျးပွီး စိတျညဈရပါတယျ။ ကြှတျသှားတဲ့ ဆံသားတှေ ကွညျ့ပွီး စိတျရှုပျရပါတယျ။ ဆံသားတှကေို ပွနျပွီး ထူလာစဖေို့ အတှကျ အစားအစာတှနေဲ့ ကွိုးစားကွပါမယျ။ အုပျစု ၄ခု ရှိပါတယျ။
ပန်းမုန်လာစိမ်း (Broccoli) မှာပါဝင်တဲ့ ဓာတ်ပေါင်းတစ်မျိုးဟာ အဆစ်အမြစ်ရာင်ရောဂါကို သက်သာစေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိတယ်လို့ ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆစ်အမြစ်ရောင် ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Osteoarthri tis, OA ရောဂါဟာ အဆစ်အမြစ်တွေ ရဲ့ အရိုးနု Cartilage ပျက်စီးယိုယွင်း ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာရတာဖြစ်ပြီး အဆစ်အမြစ်နာကျင်ခြင်းနဲ့ လှုပ်ရှား မှုတွေ ခက်ခဲခြင်းတွေကို ကြုံတွေ့ခဲ့ ရတာကို လေ့လာရပါတယ်။ ဒီမှာ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါအတွက် အဆစ်အစားထိုးကုသမှုတွေက ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပေမယ့် စရိတ်စက ကလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေပါသေးတယ်။
ဒီလေ့လာမှုမှာတော့ ပန်းမုန်လာ စိမ်းမှာပါဝင်တဲ့ Sulforaphane ဟာ OA ရောဂါမှာ ဘယ်လို အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆစ်အမြစ် ရောင်ရောဂါရှင်တွေ ဟာ ရှောင် ရှားရမယ့်အစားအစာ တွေ များပြားတဲ့အထဲက စားသုံးသင့် တဲ့ အစားအစာတစ်ခုတိုးလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Sulforophone ဟာ အဆစ်ကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့ အရိုး နုဖွဲ့စည်းမှုကို ပိုမိုခိုင်မြဲစေပြီး ပျက်စီး ယိုယွင်းမှုနှုန်းကို လျော့ကျစေတယ် လို့ လေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ National Diet Assocaition က ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပန်းမုန်လာစိမ်းဟာ ကယ်လစီ ယမ်၊ ဗီတာမင်အေ၊ စီနဲ့ ဖောလစ် အက်ဆစ်တွေပါဝင်မှုများ တဲ့အတွက် အဆစ်အမြစ်ရောဂါရှင်တွေသာမက လူတိုင်းနေ့စဉ်စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါရှင်တွေ သာမက လူတိုင်းနေ့စဉ် စားသုံးပေး သင့်ပါတယ်။ အဆစ်အမြစ် ရာင် ရောဂါရှင်တွေဟာ အစားအသောက် နဲ့ ကုသမှုတွေအပြင် နေ့စဉ်ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းများနဲ့ကိုယ် အလေးချိန် ထိန်းချုပ်ဖို့လဲလိုအပ်ကြောင်း အခု လေ့လာမှုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Credit: Nyein Aye (Health Updates Journal )
အဆဈအမွဈရောငျရောဂါကို သကျသာစတေဲ့ ပနျးမုနျလာစိမျး
ပနျးမုနျလာစိမျး (Broccoli) မှာပါဝငျတဲ့ ဓာတျပေါငျးတဈမြိုးဟာ အဆဈအမွဈရာငျရောဂါကို သကျသာစတေဲ့ အစှမျးသတ်တိရှိတယျလို့ ဖျောထုတျ နိုငျခဲ့ပါတယျ။ အဆဈအမွဈရောငျ ရောဂါတဈမြိုးဖွဈတဲ့ Osteoarthri tis, OA ရောဂါဟာ အဆဈအမွဈတှေ ရဲ့ အရိုးနု Cartilage ပကျြစီးယိုယှငျး ခွငျးကွောငျ့ ဖွဈလာရတာဖွဈပွီး အဆဈအမွဈနာကငျြခွငျးနဲ့ လှုပျရှား မှုတှေ ခကျခဲခွငျးတှကေို ကွုံတှခေဲ့ ရတာကို လလေ့ာရပါတယျ။ ဒီမှာ အဆဈအမွဈရောငျရောဂါအတှကျ အဆဈအစားထိုးကုသမှုတှကေ ပွဿနာကိုဖွရှေငျးနိုငျပမေယျ့ စရိတျစက ကလညျး ထညျ့သှငျးစဉျးစားစရာ ဖွဈနပေါသေးတယျ။
ဒီလလေ့ာမှုမှာတော့ ပနျးမုနျလာ စိမျးမှာပါဝငျတဲ့ Sulforaphane ဟာ OA ရောဂါမှာ ဘယျလို အသုံးဝငျတယျဆိုတာကို တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ အဆဈအမွဈ ရောငျရောဂါရှငျတှေ ဟာ ရှောငျ ရှားရမယျ့အစားအစာ တှေ မြားပွားတဲ့အထဲက စားသုံးသငျ့ တဲ့ အစားအစာတဈခုတိုးလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ Sulforophone ဟာ အဆဈကိုတညျဆောကျထားတဲ့ အရိုး နုဖှဲ့စညျးမှုကို ပိုမိုခိုငျမွဲစပွေီး ပကျြစီး ယိုယှငျးမှုနှုနျးကို လြော့ကစြတေယျ လို့ လလေ့ာမှုကိုပွုလုပျခဲ့တဲ့ National Diet Assocaition က ဖျောပွထားပါတယျ။
ပနျးမုနျလာစိမျးဟာ ကယျလစီ ယမျ၊ ဗီတာမငျအေ၊ စီနဲ့ ဖောလဈ အကျဆဈတှပေါဝငျမှုမြား တဲ့အတှကျ အဆဈအမွဈရောဂါရှငျတှသောမက လူတိုငျးနစေ့ဉျစားသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။ အဆဈအမွဈရောငျရောဂါရှငျတှေ သာမက လူတိုငျးနစေ့ဉျ စားသုံးပေး သငျ့ပါတယျ။ အဆဈအမွဈ ရာငျ ရောဂါရှငျတှဟော အစားအသောကျ နဲ့ ကုသမှုတှအေပွငျ နစေ့ဉျပုံမှနျ လကေ့ငျြ့ခနျးမြားနဲ့ကိုယျ အလေးခြိနျ ထိနျးခြုပျဖို့လဲလိုအပျကွောငျး အခု လလေ့ာမှုမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
ခြေဖနောင့်အရွတ်ရောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ခြေသလုံးအနောက်ကြွက်သားနှင့် ခြေဖနောင့်အရိုးကိုဆက်သွယ်ထားသော တစ်သျှူးအစုအဝေးဖြစ်သည့် ခြေဖနောင့်အရွတ်ကို အသုံးပြုမှုများသောကြောင့် ဒဏ်ရာရခြင်းဖြစ်သည်။
ခြေဖနောင့်အရွတ်ရောင်ခြင်းကို အများအားဖြင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ အိမ်တွင်သာကုသနိုင်သည်။ နောက်ထပ်ပြန်မဖြစ်အောင်တော့ မိမိဘာသာစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်သည်။ အရွတ်ရောင်ခြင်းပိုဆိုးလျှင် အရွတ်ပြဲသွားတတ်ပြီး ခွဲစိတ်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ပြေးပြီးလျှင် (သို့) အခြားအားကစားတစ်ခုခုလုပ်ပြီးလျှင် ခြေထောက်အနောက်ဖက် (သို့) ခြေဖနောင့်အထက်တွင် နာကျင်ခြင်းခံစားရတတ်ပါတယ်။ အကြာကြီးပြေးခြင်း၊ လှေကားတက်ခြင်းနှင့် စက်ဘီးမြန်မြန်နင်းခြင်းပြုလုပ်ပြီးလျှင် နာကျင်မှုပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ မနက်စောစောအိပ်ရာထချိန်တွင် နာကျင်မှုတောင့်တင်းမှုတွေကိုခံစားရပြီး လှုပ်ရှားမှုနည်းနည်းရှိရင် တဖြည်းဖြည်းပြန်ကောင်းလာပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသွားမလဲ
ခြေဖနောင့်အရွတ်နားမှာ အမြဲနာကျင်နေရင်တော့ ဆရာဝန်ပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လမ်းမလျှောက်နိုင်လောက်အောင် ပြင်းထန်စွာနာကျင်ရင်တော့ အရွတ်ပြဲထွက်သွားတာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူပါ။
ခြေဖနောင့်အရွတ်ရောင်ခြင်းက ဒီအရွတ်ပေါ်မှာ ထပ်ခါထပ်ခါနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့အားသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေဖနောင့်အရွတ်ကို လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ ခုန်ခြင်းနဲ့ ခြေဖနောင့်ထောက်ခြင်းတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုရပါတယ်။
ခြေဖနောင့်အရွတ်ရဲ့တည်ဆောက်မှုက အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအားနည်းလာပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာပိုရလွယ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်တွေမှာပဲ အားကစားလုပ်သူတွေ၊ ပြေးနေချိန်မှာ ရုတ်တရက်အရှိန်မြှင့်လိုက်တဲ့သူတွေမှာ ဒီလိုပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
1. အမျိုးသား/အမျိုးသမီး - အမျိုးသားတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
2. အသက်အရွယ် - အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ပိုပြီးအရွတ်ရောင်နိုင်ချေများပါတယ်။
3. ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံ - ခြေဖဝါးတစ်ညီတည်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေမှာ ခြေဖနောင့်အရွတ်ပေါ်ကို ပိုပြီးဖိအားများများသက်ရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်းနှင့် ခြေသလုံးကြွက်သားတုတ်ခြင်းကြောင့်လည်း ဖိအားများစေပါတယ်။
4. အားကစားပစ္စည်းနှင့် နေရာ ရွေးချယ်မှု - စုတ်ပြဲနေသောအားကစားဖိနပ်များစီးပြီးပြေးခြင်းကြောင့် အရွတ်ရောင်နိုင်ချေများပါတယ်။ အရွတ်နာခြင်းက ပူနွေးတဲ့ရာသီဥတုထက်စာရင် အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာပိုဖြစ်နိုင်ပြီး တောင်ကုန်းထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာပြေးခြင်းကလည်း ခြေဖနောင့်အရွတ်ကို ဒဏ်ပိုဖြစ်စေပါတယ်။
5. ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ - Psoriasis ရောဂါရှိသူတွေ နဲ့ သွေးတိုးရှိသူတွေမှာ အရွတ်ရောင်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
6. ဆေးဝါးများ - Fluoroquinolones လို့ခေါ်တဲ့ပိုးသတ်ဆေးတွေကြောင့် ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ခြေဖနောင့်အရွတ်ရောင်တာကြာလာရင် အရွတ်အားနည်းလာပြီးတော့ နောက်ပိုင်းမှာ အရွတ်ပြဲသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင်တော့ ခွဲစိတ်ပြီး ပြုပြင်ရပါမယ်။
1. ဓာတ်မှန် - ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့် အရွတ်လိုမျိုးတစ်သျှူးအမျိုးအစားကို မကြည့်နိုင်ပေမယ့် ရောဂါလက္ခဏာတူတဲ့ အခြားရောဂါတစ်ခုခုရှိ/မရှိ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
2. အာထရာဆောင်း - အာထရာလ်ဆောင်းရိုက်ခြင်းဖြင့် ခြေဖနောင့်အရွတ်ရဲ့ပုံရိပ်ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ color-droppler ultrasound ကတော့ အရွတ်ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုသိစေနိုင်ပါတယ်။
3. MRI - ရေဒီယိုလှိုင်းတွေနဲ့ အားကောင်းတဲ့ သံလိုက်ဓာတ်ကိုအသုံးပြုပြီးရိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အရွတ်ရဲ့အသေးစိတ်ပုံရိပ်ကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။
1. ဆေးဝါးများ - Ibuprofen ( Advil, Mortrin IB), Naproxen (Aleve) စတဲ့ အနာသက်သာဆေးတွေကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း သောက်နိုင်ပါတယ်။
အနာကျက်စေဖို့နဲ့ အရွတ်နဲ့ အရွတ်ကို အထောက်အပံ့ပေးနေတဲ့အရာတွေကို သန်မာစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်က ပြုသပေးပါလိမ့်မယ်။
3. သက်သာစေသော ကိရိယာများ - ရှူးဖိနပ်ထဲတွင် တစ်ခုခုထည့်ထားခြင်းဖြင့် ခြေဖနောင့်ကိုအနည်းငယ်မြှင့်တင်ပေးပြီး အရွတ်ပေါ်ကိုသက်ရောက်နေတဲ့ဖိအားတွေကို လျော့နည်းစေဖို့ ခုခံပေးထားပါတယ်။
4. ခွဲစိတ်ခြင်း - လအတော်ကြာအထိ မတိုးတက်လာဘူးဆိုရင် (သို့) အရွတ်ပြဲသွားရင် ဆရာဝန်ကခွဲစိတ်ပြီး အရွတ်ကိုပြုပြင်ဖို့အတွက် အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။
1. အနားယူခြင်း - ရက်အတော်ကြာအောင် လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်ပဲနေရပါမယ် (သို့) အရွတ်ကိုဖိအားမဖြစ်စေမယ့် ရေကူးခြင်းကဲ့သို့သော လေ့ကျင့်ခန်းပြောင်းလုပ်ပါ။ ပြင်းထန်ရင်တော့ လမ်းလျှောက်ဘွတ်ဖိနပ်ဝတ်ခြင်း၊ ချိုင်းထောက်အသုံးပြုခြင်းတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
2. ရေခဲကပ်ခြင်း - လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးချိန် (သို့) နာလာတဲ့အချိန်တွေမှာ ခြေဖနောင့်အရွတ်ပေါ်ကို ရေခဲဝတ်နဲ့ 15 မိနစ်ခန့်ကပ်ပေးခြင်းဖြင့် နာကျင်ခြင်းနဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းများကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
3. ဖိအားပေးခြင်း - ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ပတ်တီးများပတ်ထားခြင်းဖြင့်လည်း ရောင်ရမ်းခြင်းကိုသက်သာစေပြီး အရွတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။
4. ခြေထောက်မြှင့်ထားခြင်း - ဖြစ်တဲ့ခြေထောက်ကို နှလုံးထက်မြင့်အောင်မြှောက်ထားခြင်းဖြင့်လည်း အရောင်ကျစေပါတယ်။ ညအိပ်ရင်ခြေထောက်မြှင့်ပြီးအိပ်ပါ။
ခြေဖနောင့်အရွတ်ရောင်ခြင်းမဖြစ်အောင် မကာကွယ်နိုင်ပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေကိုတော့နည်းသွားအောင်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
1. လှုပ်ရှားမှုကို ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲအရှိန်မြှင့်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးကုသမယ်ဆိုရင် ဖြည်းဖြည်းချင်းစလုပ်ပြီးတော့မှ တဖြည်းဖြည်းအရှိန်နဲ့ ကြာချိန်ကိုမြှင့်ပါ။
2. သက်သက်သာသာပဲလုပ်ပါ။ တောင်ကုန်းပေါ်မှာပြေးခြင်းလိုမျိုး အရွတ်ပေါ်ကိုဖိအားများများကျရောက်စေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်ပါနဲ့။ ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်ဆိုရင် မလုပ်ခင်သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းအရင်လုပ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်အတွင်းနာလာရင်တော့ ရပ်ပြီးအနားယူလိုက်ပါ။
3. အားကစားဖိနပ်ကို သေချာစွာရွေးချယ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်စီးတဲ့ဖိနပ်က ခုခံမှုကောင်းပြီး ကွက်တိဖြစ်နေမှ အရွတ်ပေါ်ကို ဖိအားသက်ရောက်မှုနည်းစေမှာပါ။ စုတ်ပြဲနေတဲ့ ဖိနပ်တွေကို လဲလိုက်ပါ။
4. နေ့စဉ်အချိန်ပေးပြီး မနက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်နဲ့ လုပ်ပြီးချိန်မှာ ခြေသလုံးကြွက်သားနဲ့ ခြေဖနောင့်အရွတ်ကိုဆွဲဆန့်ပေးခြင်းဖြင့် ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ ဒါက အရွတ်ရောင်ခြင်းပြန်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
5. ခြေသလုံးကြွက်သားကို သန်မာနေပါစေ။ ခြေသလုံးကြွက်သားတွေသန်မာနေမယ်ဆိုရင် လှုပ်ရှားမှုနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကြောင့် ခြေသလုံးနဲ့ အရွတ်အပေါ် အားသက်ရောက်မှုကို ကောင်းစွာခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
6. ဖိအားများတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်တဲ့ ပြေးခြင်း၊ ခုန်ခြင်းတို့နဲ့ ဖိအားနည်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်တဲ့ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ရေကူးခြင်းတို့ကို တစ်လှည့်စီလုပ်ပေးပါ။
7. ကိုယ်အလေးချိန်ပုံမှန်အတွင်းပဲရှိအောင် ဂရုစိုက်ပါ။
ခွဖေနောငျ့အရှတျရောငျခွငျးဆိုသညျမှာ ခွသေလုံးအနောကျကွှကျသားနှငျ့ ခွဖေနောငျ့အရိုးကိုဆကျသှယျထားသော တဈသြှူးအစုအဝေးဖွဈသညျ့ ခွဖေနောငျ့အရှတျကို အသုံးပွုမှုမြားသောကွောငျ့ ဒဏျရာရခွငျးဖွဈသညျ။
ခွဖေနောငျ့အရှတျရောငျခွငျးကို အမြားအားဖွငျ့ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြနှငျ့အညီ အိမျတှငျသာကုသနိုငျသညျ။ နောကျထပျပွနျမဖွဈအောငျတော့ မိမိဘာသာစောငျ့ရှောကျဖို့လိုအပျသညျ။ အရှတျရောငျခွငျးပိုဆိုးလြှငျ အရှတျပွဲသှားတတျပွီး ခှဲစိတျပွုပွငျဖို့လိုအပျပါတယျ။
ပွေးပွီးလြှငျ (သို့) အခွားအားကစားတဈခုခုလုပျပွီးလြှငျ ခွထေောကျအနောကျဖကျ (သို့) ခွဖေနောငျ့အထကျတှငျ နာကငျြခွငျးခံစားရတတျပါတယျ။ အကွာကွီးပွေးခွငျး၊ လှကေားတကျခွငျးနှငျ့ စကျဘီးမွနျမွနျနငျးခွငျးပွုလုပျပွီးလြှငျ နာကငျြမှုပိုဆိုးနိုငျပါတယျ။ တဈခါတဈရံ မနကျစောစောအိပျရာထခြိနျတှငျ နာကငျြမှုတောငျ့တငျးမှုတှကေိုခံစားရပွီး လှုပျရှားမှုနညျးနညျးရှိရငျ တဖွညျးဖွညျးပွနျကောငျးလာပါတယျ။
ဘယျအခြိနျမှာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခနျးသှားမလဲ
ခွဖေနောငျ့အရှတျနားမှာ အမွဲနာကငျြနရေငျတော့ ဆရာဝနျပွသဖို့လိုအပျပါတယျ။ လမျးမလြှောကျနိုငျလောကျအောငျ ပွငျးထနျစှာနာကငျြရငျတော့ အရှတျပွဲထှကျသှားတာဖွဈနိုငျတဲ့အတှကျ ခကျြခငျြးဆေးကုသမှုခံယူပါ။
ခွဖေနောငျ့အရှတျရောငျခွငျးက ဒီအရှတျပျေါမှာ ထပျခါထပျခါနဲ့ ပွငျးထနျတဲ့အားသကျရောကျမှုကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ခွဖေနောငျ့အရှတျကို လမျးလြှောကျခွငျး၊ ပွေးခွငျး၊ ခုနျခွငျးနဲ့ ခွဖေနောငျ့ထောကျခွငျးတှပွေုလုပျတဲ့အခါမှာ အသုံးပွုရပါတယျ။
ခွဖေနောငျ့အရှတျရဲ့တညျဆောကျမှုက အသကျကွီးလာတာနဲ့အမြှအားနညျးလာပွီး ထိခိုကျဒဏျရာပိုရလှယျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ စနေ၊ တနင်ျဂနှေ ပိတျရကျတှမှောပဲ အားကစားလုပျသူတှေ၊ ပွေးနခြေိနျမှာ ရုတျတရကျအရှိနျမွှငျ့လိုကျတဲ့သူတှမှော ဒီလိုပိုဖွဈတတျပါတယျ။
1. အမြိုးသား/အမြိုးသမီး - အမြိုးသားတှမှော ပိုအဖွဈမြားပါတယျ။
2. အသကျအရှယျ - အသကျကွီးလာတာနဲ့အမြှ ပိုပွီးအရှတျရောငျနိုငျခမြေားပါတယျ။
3. ခန်ဓာကိုယျတညျဆောကျပုံ - ခွဖေဝါးတဈညီတညျးဖွဈနတေဲ့သူတှမှော ခွဖေနောငျ့အရှတျပျေါကို ပိုပွီးဖိအားမြားမြားသကျရောကျလရှေိ့ပါတယျ။ အဝလှနျခွငျးနှငျ့ ခွသေလုံးကွှကျသားတုတျခွငျးကွောငျ့လညျး ဖိအားမြားစပေါတယျ။
4. အားကစားပစ်စညျးနှငျ့ နရော ရှေးခယျြမှု - စုတျပွဲနသေောအားကစားဖိနပျမြားစီးပွီးပွေးခွငျးကွောငျ့ အရှတျရောငျနိုငျခမြေားပါတယျ။ အရှတျနာခွငျးက ပူနှေးတဲ့ရာသီဥတုထကျစာရငျ အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာပိုဖွဈနိုငျပွီး တောငျကုနျးထူထပျတဲ့နရောတှမှောပွေးခွငျးကလညျး ခွဖေနောငျ့အရှတျကို ဒဏျပိုဖွဈစပေါတယျ။
5. ကနျြးမာရေးအခွအေနမြေား - Psoriasis ရောဂါရှိသူတှေ နဲ့ သှေးတိုးရှိသူတှမှော အရှတျရောငျနိုငျခပြေိုမြားပါတယျ။
6. ဆေးဝါးမြား - Fluoroquinolones လို့ချေါတဲ့ပိုးသတျဆေးတှကွေောငျ့ ပိုဖွဈတတျပါတယျ။
ခွဖေနောငျ့အရှတျရောငျတာကွာလာရငျ အရှတျအားနညျးလာပွီးတော့ နောကျပိုငျးမှာ အရှတျပွဲသှားတတျပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈရငျတော့ ခှဲစိတျပွီး ပွုပွငျရပါမယျ။
1. ဓာတျမှနျ - ဓာတျမှနျရိုကျခွငျးဖွငျ့ အရှတျလိုမြိုးတဈသြှူးအမြိုးအစားကို မကွညျ့နိုငျပမေယျ့ ရောဂါလက်ခဏာတူတဲ့ အခွားရောဂါတဈခုခုရှိ/မရှိ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
2. အာထရာဆောငျး - အာထရာလျဆောငျးရိုကျခွငျးဖွငျ့ ခွဖေနောငျ့အရှတျရဲ့ပုံရိပျကို တှနေို့ငျပါတယျ။ color-droppler ultrasound ကတော့ အရှတျပတျပတျလညျမှာရှိတဲ့ သှေးလှညျ့ပတျမှုကိုသိစနေိုငျပါတယျ။
3. MRI - ရဒေီယိုလှိုငျးတှနေဲ့ အားကောငျးတဲ့ သံလိုကျဓာတျကိုအသုံးပွုပွီးရိုကျခွငျးဖွဈပွီး အရှတျရဲ့အသေးစိတျပုံရိပျကိုမွငျနိုငျပါတယျ။
1. ဆေးဝါးမြား - Ibuprofen ( Advil, Mortrin IB), Naproxen (Aleve) စတဲ့ အနာသကျသာဆေးတှကေို ဆရာဝနျညှနျကွားတဲ့အတိုငျး သောကျနိုငျပါတယျ။
အနာကကျြစဖေို့နဲ့ အရှတျနဲ့ အရှတျကို အထောကျအပံ့ပေးနတေဲ့အရာတှကေို သနျမာစတေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျဖို့လိုအပျတယျဆိုရငျ ဆရာဝနျက ပွုသပေးပါလိမျ့မယျ။
3. သကျသာစသေော ကိရိယာမြား - ရှူးဖိနပျထဲတှငျ တဈခုခုထညျ့ထားခွငျးဖွငျ့ ခွဖေနောငျ့ကိုအနညျးငယျမွှငျ့တငျပေးပွီး အရှတျပျေါကိုသကျရောကျနတေဲ့ဖိအားတှကေို လြော့နညျးစဖေို့ ခုခံပေးထားပါတယျ။
4. ခှဲစိတျခွငျး - လအတျောကွာအထိ မတိုးတကျလာဘူးဆိုရငျ (သို့) အရှတျပွဲသှားရငျ ဆရာဝနျကခှဲစိတျပွီး အရှတျကိုပွုပွငျဖို့အတှကျ အကွံပေးပါလိမျ့မယျ။
1. အနားယူခွငျး - ရကျအတျောကွာအောငျ လကေ့ငျြ့ခနျးမပွုလုပျပဲနရေပါမယျ (သို့) အရှတျကိုဖိအားမဖွဈစမေယျ့ ရကေူးခွငျးကဲ့သို့သော လကေ့ငျြ့ခနျးပွောငျးလုပျပါ။ ပွငျးထနျရငျတော့ လမျးလြှောကျဘှတျဖိနပျဝတျခွငျး၊ ခြိုငျးထောကျအသုံးပွုခွငျးတှလေုပျဖို့လိုအပျပါတယျ။
2. ရခေဲကပျခွငျး - လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီးခြိနျ (သို့) နာလာတဲ့အခြိနျတှမှော ခွဖေနောငျ့အရှတျပျေါကို ရခေဲဝတျနဲ့ 15 မိနဈခနျ့ကပျပေးခွငျးဖွငျ့ နာကငျြခွငျးနဲ့ ရောငျရမျးခွငျးမြားကို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။
3. ဖိအားပေးခွငျး - ကြုံ့နိုငျဆနျ့နိုငျတဲ့ပတျတီးမြားပတျထားခွငျးဖွငျ့လညျး ရောငျရမျးခွငျးကိုသကျသာစပွေီး အရှတျလှုပျရှားမှုကိုလြော့နညျးစပေါတယျ။
4. ခွထေောကျမွှငျ့ထားခွငျး - ဖွဈတဲ့ခွထေောကျကို နှလုံးထကျမွငျ့အောငျမွှောကျထားခွငျးဖွငျ့လညျး အရောငျကစြပေါတယျ။ ညအိပျရငျခွထေောကျမွှငျ့ပွီးအိပျပါ။
ခွဖေနောငျ့အရှတျရောငျခွငျးမဖွဈအောငျ မကာကှယျနိုငျပမေယျ့ ဖွဈနိုငျခကြေိုတော့နညျးသှားအောငျလြှော့ခနြိုငျပါတယျ။
1. လှုပျရှားမှုကို ဖွညျးဖွညျးခငျြးပဲအရှိနျမွှငျ့ပါ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီးကုသမယျဆိုရငျ ဖွညျးဖွညျးခငျြးစလုပျပွီးတော့မှ တဖွညျးဖွညျးအရှိနျနဲ့ ကွာခြိနျကိုမွှငျ့ပါ။
2. သကျသကျသာသာပဲလုပျပါ။ တောငျကုနျးပျေါမှာပွေးခွငျးလိုမြိုး အရှတျပျေါကိုဖိအားမြားမြားကရြောကျစမေယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှမေလုပျပါနဲ့။ ပွငျးထနျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရမယျဆိုရငျ မလုပျခငျသှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျးအရငျလုပျပါ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနစေဉျအတှငျးနာလာရငျတော့ ရပျပွီးအနားယူလိုကျပါ။
3. အားကစားဖိနပျကို သခြောစှာရှေးခယျြပါ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရငျစီးတဲ့ဖိနပျက ခုခံမှုကောငျးပွီး ကှကျတိဖွဈနမှေ အရှတျပျေါကို ဖိအားသကျရောကျမှုနညျးစမှောပါ။ စုတျပွဲနတေဲ့ ဖိနပျတှကေို လဲလိုကျပါ။
4. နစေ့ဉျအခြိနျပေးပွီး မနကျပိုငျးလကေ့ငျြ့ခနျးမလုပျခငျနဲ့ လုပျပွီးခြိနျမှာ ခွသေလုံးကွှကျသားနဲ့ ခွဖေနောငျ့အရှတျကိုဆှဲဆနျ့ပေးခွငျးဖွငျ့ ကြုံ့နိုငျဆနျ့နိုငျမှုကို ထိနျးသိမျးပေးပါတယျ။ ဒါက အရှတျရောငျခွငျးပွနျမဖွဈအောငျကာကှယျပေးပါတယျ။
5. ခွသေလုံးကွှကျသားကို သနျမာနပေါစေ။ ခွသေလုံးကွှကျသားတှသေနျမာနမေယျဆိုရငျ လှုပျရှားမှုနဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတှကွေောငျ့ ခွသေလုံးနဲ့ အရှတျအပျေါ အားသကျရောကျမှုကို ကောငျးစှာခံနိုငျပါလိမျ့မယျ။
6. ဖိအားမြားတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှဖွေဈတဲ့ ပွေးခွငျး၊ ခုနျခွငျးတို့နဲ့ ဖိအားနညျးတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတှဖွေဈတဲ့ စကျဘီးစီးခွငျး၊ ရကေူးခွငျးတို့ကို တဈလှညျ့စီလုပျပေးပါ။
7. ကိုယျအလေးခြိနျပုံမှနျအတှငျးပဲရှိအောငျ ဂရုစိုကျပါ။
ပျိုမေတွေအနေနဲ့ ချိုင်းမည်းနေခြင်းကြောင့် အင်္ကျီလက်ပြတ်တွေကို ၀တ်ဆင်ရမှာ စိုးရွံ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချိုင်းကြားအသားအရေဖြူဝင်းလာအောင် အထိရောက်ဆုံးပြုလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သံပုရာသီးဟာချေးချွတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိတယ်ဆိုတာကိုလူအများစုက သတိမထားမိတတ်ကြပါဘူး။ တစ်ရက်ခြားတစ်ခါ ရေမချိုးမီအချိန်တိုင်း ချိုင်းသားကိုသံပုရာရည်နဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အမည်းရောင်တွေမှေးမှိန်လာပါလိမ့်မယ်။ သံပုရာရည်နဲ့ပွတ်ပြီးသွားရင် အသားအရေခြောက်သွေ့သွားတဲ့အတွက် ရေချိုးပြီးချိန်မှာအစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ် မဖြစ်မနေလိမ်းပေးရပါမယ်။
ချိုင်းမွှေးရိတ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်အချို့ ချိုင်းမွှေးကျွတ်ခရင်မ်တွေအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ချိုင်းမည်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖယောင်းကိုအသုံးပြုပြီး ချိုင်းမွှေးများကိုဖယ်ရှားပေးပါ။
3. အာလူး၊ သခွားရည်
သံပုရာသီးလိုပဲအာလူးကလည်း ချေးချွတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ပါးပါးလှီးထားတဲ့အာလူးနဲ့ပွတ်တိုက်ပြီး ၁၅ မိနစ်ကြာခန့်ထားပါ။ ၎င်းနောက် ရေအေးနဲ့ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် သခွားသီးအရည်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လက်တစ်ဆုပ်စာဂျုံမှုန့်ကိုဒိန်ချဉ်၊ ရှောက်သီး၊ နနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်နဲ့ရောပြီး အနှစ်ပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက် ချိုင်းသားကိုလိမ်းပေးပြီး ၁၅-၂၀ မိနစ်ကြာခန့်ထားပါ။ ၎င်းနောက် ရေအေးနဲ့ ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ အသင့် ပေါင်းတင်ထုပ်တွေလည်းဈေးကွက်မှာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ရွံ့အခြေခံတဲ့အသားဖြူဝင်းစေသော (clay-based lightening skin) ပေါင်းတင်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။
5. စန္ဒကူးနံ့သာနှင့် နှင်းဆီပွင့်ဖတ်ရည်
စန္ဒကူးမှာ ဖြူဝင်းစေတဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိပြီး နှင်းဆီပွင့်ဖတ်ရည်ကအရေပြားအေးစေပါတယ်။ စန္ဒကူးမှုန့်နဲ့ နှင်းဆီပွင့်ဖတ်ရည်ရောထားတဲ့အနှစ်ကို ချိုင်းသားတွင်လိမ်းပေးပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ထားပါ။ ၎င်းနောက် ရေအေးနဲ့ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ ယင်းနည်းလမ်းကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုပါက ချိုင်းသားတနေ့တခြား ဖြူဝင်းလာစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်ချဉ်သွေးလိမ်းရင်လည်း ချိုင်းသားဖြူဝင်းလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဟိုးအရင်အချိန်ကတည်းက မြန်မာတွေတော်တော်များများ အသုံးပြုခဲ့တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုမတှေအေနနေဲ့ ခြိုငျးမညျးနခွေငျးကွောငျ့ အကငြ်္ီလကျပွတျတှကေို ၀တျဆငျရမှာ စိုးရှံ့နတေတျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခြိုငျးကွားအသားအရဖွေူဝငျးလာအောငျ အထိရောကျဆုံးပွုလုပျပေးနိုငျစှမျးရှိတဲ့ သဘာဝနညျးလမျးလေးတှကေို ရှေးခယျြဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
သံပုရာသီးဟာခြေးခြှတျပေးနိုငျတယျဆိုတဲ့ အစှမျးသတ်တိရှိတယျဆိုတာကိုလူအမြားစုက သတိမထားမိတတျကွပါဘူး။ တဈရကျခွားတဈခါ ရမေခြိုးမီအခြိနျတိုငျး ခြိုငျးသားကိုသံပုရာရညျနဲ့ ပှတျတိုကျပေးပါ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အမညျးရောငျတှမှေေးမှိနျလာပါလိမျ့မယျ။ သံပုရာရညျနဲ့ပှတျပွီးသှားရငျ အသားအရခွေောကျသှသှေ့ားတဲ့အတှကျ ရခြေိုးပွီးခြိနျမှာအစိုဓာတျထိနျးခရငျမျ မဖွဈမနလေိမျးပေးရပါမယျ။
ခြိုငျးမှေးရိတျခွငျးဒါမှမဟုတျအခြို့ ခြိုငျးမှေးကြှတျခရငျမျတှအေသုံးပွုခွငျးကွောငျ့ ခြိုငျးမညျးစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဖယောငျးကိုအသုံးပွုပွီး ခြိုငျးမှေးမြားကိုဖယျရှားပေးပါ။
3. အာလူး၊ သခှားရညျ
သံပုရာသီးလိုပဲအာလူးကလညျး ခြေးခြှတျနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ ပါးပါးလှီးထားတဲ့အာလူးနဲ့ပှတျတိုကျပွီး ၁၅ မိနဈကွာခနျ့ထားပါ။ ၎င်းငျးနောကျ ရအေေးနဲ့ဆေးကွောသနျ့စငျပါ။ ဒါမှမဟုတျ သခှားသီးအရညျကိုလညျး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
လကျတဈဆုပျစာဂြုံမှုနျ့ကိုဒိနျခဉျြ၊ ရှောကျသီး၊ နနှငျးမှုနျ့အနညျးငယျနဲ့ရောပွီး အနှဈပွုလုပျပါ။ ထို့နောကျ ခြိုငျးသားကိုလိမျးပေးပွီး ၁၅-၂၀ မိနဈကွာခနျ့ထားပါ။ ၎င်းငျးနောကျ ရအေေးနဲ့ ဆေးကွောသနျ့စငျပါ။ အသငျ့ ပေါငျးတငျထုပျတှလေညျးစြေးကှကျမှာ ၀ယျယူရရှိနိုငျပါတယျ။ ရှံ့အခွခေံတဲ့အသားဖွူဝငျးစသေော (clay-based lightening skin) ပေါငျးတငျအမြိုးအစားကို ရှေးခယျြဝယျယူပါ။
5. စန်ဒကူးနံ့သာနှငျ့ နှငျးဆီပှငျ့ဖတျရညျ
စန်ဒကူးမှာ ဖွူဝငျးစတေဲ့အစှမျးသတ်တိရှိပွီး နှငျးဆီပှငျ့ဖတျရညျကအရပွေားအေးစပေါတယျ။ စန်ဒကူးမှုနျ့နဲ့ နှငျးဆီပှငျ့ဖတျရညျရောထားတဲ့အနှဈကို ခြိုငျးသားတှငျလိမျးပေးပွီး မိနဈအနညျးငယျထားပါ။ ၎င်းငျးနောကျ ရအေေးနဲ့ဆေးကွောသနျ့စငျပါ။ ယငျးနညျးလမျးကိုနစေ့ဉျအသုံးပွုပါက ခြိုငျးသားတနတေ့ခွား ဖွူဝငျးလာစနေိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ကြောကျခဉျြသှေးလိမျးရငျလညျး ခြိုငျးသားဖွူဝငျးလာနိုငျပါတယျ။ ဒါကတော့ ဟိုးအရငျအခြိနျကတညျးက မွနျမာတှတေျောတျောမြားမြား အသုံးပွုခဲ့တဲ့နညျးလမျးဖွဈပါတယျ။
၃ရက်အတွင်း ၁၀ပေါင်ကျစေမယ့် Diet Plan
ဒီတပတ် Diet Plan ကတော့ ၃ရက်စာ အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆီကျစေပြီး ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်သွားစေချင်တဲ့သူတွေ အတွက် သဘာဝနည်းအတိုင်း Diet Plan တွေကို လုပ်ဆောင်ပြီး လျှော့ချလို့ ရပါတယ်။ ဒီတပတ်မှာတော့ နာနတ်သီးကို အခြေခံပြီး စားရမယ့် Plan ပါ။ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေ ပါဝင်တဲ့ အတွက် ကျန်းမာစေတဲ့ ဒီအသီးကို စားပြီး ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ကျအောင် ကြိုးစားကြည့်ကြပါစို့။
အမြဲတမ်း သတိပေးဖြစ်တဲ့ စကားလေးကိုတော့ ထပ်ပြီးတော့ ပြောပါရစေ။ ကိုယ်က ပိန်ချင်ဇောနဲ့ Planတွေကို စားတဲ့အခါ အချို့ အစားအစာတွေဟာ ကိုယ်နဲ့ ဓာတ်မတည့်တာမျိုး ကိုယ့်မှာ အစာအိမ်ရောဂါ ရှိနေတာမျိုးနဲ့ အခြားရောဂါတွေ ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ Diet Plan တွေကို လုပ်ပါလို့ အကြံပေးပါရစေ။
မနက်စာ – ပေါင်မုန့်မီးကင် ၂ချပ်နဲ့ နာနတ်သီး ၂စိပ် စားပါ။
နေ့လည်စာ – ပန်းပွင့်စိမ်းကို အမဲသားအနည်းငယ်နဲ့ချက်စားပါ။ နာနတ်သီး ၂စိပ် စားပါ။
ညစာ – မုန်လာထုပ်၊ ကြက်ရင်ပုံ တစ်ပိုင်း၊ နာနတ်သီး ၂စိပ် စားပေးပါ။
မနက်စာ – ဒိန်ချဉ်၊ ပေါင်မုန့် ၂ချပ်၊ နာနတ်သီး ၂စိပ် စားပါ။
နေ့လည်ဟာ – ငါး ၂၀၀ ဂရမ် စားပါ။ နာနတ်သီး ၂စိပ် စားပါ။
ညစာ – နာနတ်သီး ၂စိပ်စားပါ။ တူနာငါး တစ်ဘူးနဲ့ မုန်လာထုပ်စားပါ။
မနက်စာ – ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ပါ (အမှုန့်ရိုးရိုး ဖျော်သောက်ပါ။ အသင့်ဖျော် အထုပ်တွေ မရပါ)၊ ကွတ်ကီး ၂ခုစားပါ။ နာနတ်သီး ၂စိပ်စားပါ။
နေ့လည်စာ – ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အသီးအရွက်တစ်မျိုးကို ပြုတ်စားပါ။ ကြက်ရင်ပုံတစ်ပိုင်းနဲ့ နာနတ်သီး ၂စိပ် စားပါ။
ညစာ – အသီးအရွက် ခရင်မ်စာပါ။ နာနတ်သီး ၂စိပ် စားပါ။
အစားအစာတွေကို သံလွင်၊ ဆားအနည်းငယ်နဲ့ Vinegar တို့ တွဲစားလို့ ရပါတယ်။ ရေ အနည်းဆုံး ၃လီတာ သောက်ပေးပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ရှိပါစေ။
၃ရကျအတှငျး ၁၀ပေါငျကစြမေယျ့ Diet Plan
ဒီတပတျ Diet Plan ကတော့ ၃ရကျစာ အတှကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဆီကစြပွေီး ခပျြခပျြရပျရပျ ဖွဈသှားစခေငျြတဲ့သူတှေ အတှကျ သဘာဝနညျးအတိုငျး Diet Plan တှကေို လုပျဆောငျပွီး လြှော့ခလြို့ ရပါတယျ။ ဒီတပတျမှာတော့ နာနတျသီးကို အခွခေံပွီး စားရမယျ့ Plan ပါ။ အငျတီအောကျဆီးဒငျ့နဲ့ အမြှငျဓာတျတှေ ပါဝငျတဲ့ အတှကျ ကနျြးမာစတေဲ့ ဒီအသီးကို စားပွီး ကိုယျအလေးခြိနျ လြှော့ကအြောငျ ကွိုးစားကွညျ့ကွပါစို့။
အမွဲတမျး သတိပေးဖွဈတဲ့ စကားလေးကိုတော့ ထပျပွီးတော့ ပွောပါရစေ။ ကိုယျက ပိနျခငျြဇောနဲ့ Planတှကေို စားတဲ့အခါ အခြို့ အစားအစာတှဟော ကိုယျနဲ့ ဓာတျမတညျ့တာမြိုး ကိုယျ့မှာ အစာအိမျရောဂါ ရှိနတောမြိုးနဲ့ အခွားရောဂါတှေ ရှိနခေဲ့မယျဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပွီးမှ Diet Plan တှကေို လုပျပါလို့ အကွံပေးပါရစေ။
မနကျစာ – ပေါငျမုနျ့မီးကငျ ၂ခပျြနဲ့ နာနတျသီး ၂စိပျ စားပါ။
နလေ့ညျစာ – ပနျးပှငျ့စိမျးကို အမဲသားအနညျးငယျနဲ့ခကျြစားပါ။ နာနတျသီး ၂စိပျ စားပါ။
ညစာ – မုနျလာထုပျ၊ ကွကျရငျပုံ တဈပိုငျး၊ နာနတျသီး ၂စိပျ စားပေးပါ။
မနကျစာ – ဒိနျခဉျြ၊ ပေါငျမုနျ့ ၂ခပျြ၊ နာနတျသီး ၂စိပျ စားပါ။
နလေ့ညျဟာ – ငါး ၂၀၀ ဂရမျ စားပါ။ နာနတျသီး ၂စိပျ စားပါ။
ညစာ – နာနတျသီး ၂စိပျစားပါ။ တူနာငါး တဈဘူးနဲ့ မုနျလာထုပျစားပါ။
မနကျစာ – ကျောဖီတဈခှကျသောကျပါ (အမှုနျ့ရိုးရိုး ဖြျောသောကျပါ။ အသငျ့ဖြျော အထုပျတှေ မရပါ)၊ ကှတျကီး ၂ခုစားပါ။ နာနတျသီး ၂စိပျစားပါ။
နလေ့ညျစာ – ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အသီးအရှကျတဈမြိုးကို ပွုတျစားပါ။ ကွကျရငျပုံတဈပိုငျးနဲ့ နာနတျသီး ၂စိပျ စားပါ။
ညစာ – အသီးအရှကျ ခရငျမျစာပါ။ နာနတျသီး ၂စိပျ စားပါ။
အစားအစာတှကေို သံလှငျ၊ ဆားအနညျးငယျနဲ့ Vinegar တို့ တှဲစားလို့ ရပါတယျ။ ရေ အနညျးဆုံး ၃လီတာ သောကျပေးပါ။ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှု ရှိပါစေ။
နှုတ်ခမ်းသားနူးညံ့စိုပြေ၍ ပန်းနုရောင်သမ်းနေစေရန် နည်းလမ်းများ
ရေသောက်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာစိုပြေသောအသားအရည်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရုံမျှမက သဘာဝအလှတရားကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းသားစိုပြေစေရန် ရေဓာတ်မှာအလွန်အရေးကြီးတာကြောင့် တစ်နေ့လျှင် ရေ 8 ဖန်ခွက် (2 လီတာ)ထိသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အသီးအနှံတွေများများစားပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် E နဲ့ ဗီတာမင် B တို့ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ထောပတ်သီး၊ သင်္ဘောသီး၊ ကီဝီနဲ့ ဘယ်ရီသီးတွေ စားပေးခြင်းဖြင့် နှုတ်ခမ်းသား အသားအရည်လှပလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
မကြာခဏအစိုဓာတ်ဖြည့်ဆည်းပေးပါ။ နှုတ်ခမ်းအဆီတောင့်ကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲအမြဲထည့်ထားပြီး လေးနာရီတစ်ကြိမ်လောက် ဆိုးပေးခြင်းဖြင့် နှုတ်ခမ်းသားကိုစိုပြေစေရုံမျှမက နှုတ်ခမ်းသားမဲခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
2. လျှာဖြင့်သပ်ခြင်း (သို့) ကိုက်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်
လုံးဝမကောင်းတဲ့အမူအကျင့်ဖြစ်တဲ့အပြင် နှုတ်ခမ်းကိုက်ခြင်းဖြင့် နှုတ်ခမ်းသားကို ကွဲစေရုံသာမက နှုတ်ခမ်းသားပါမဲလာပါလိမ့်မည်။ လျှာဖြင့်သပ်ခြင်းကြောင့်လည်း နှုတ်ခမ်းသားခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါတယ်။
3. ဈေးပေါသော အလှပြင်ပစ္စည်းများကိုမသုံးစွဲပါနှင့်
ဈေးသက်သာတဲ့နှုတ်ခမ်းနီတောင့်တွေဟာ နှုတ်ခမ်းသားကိုမဲ၍ ခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ တံဆိပ်မျိုးကိုသာ ရွေးချယ်သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
ယခုအသုံးပြုနေသော Today Bago Version အဟောင်းတွင် 25ရက်နေ့မှစပြီး ဆက်လက်တင်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် Today Bago Version အသစ်အား Download ပြုလုပ်ပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအပ်ပါသည်။
နှုတျခမျးသားနူးညံ့စိုပွေ၍ ပနျးနုရောငျသမျးနစေရေနျ နညျးလမျးမြား
ရသေောကျခွငျးဖွငျ့ ကနျြးမာစိုပွသေောအသားအရညျကို ပိုငျဆိုငျနိုငျရုံမြှမက သဘာဝအလှတရားကိုလညျး ရရှိနိုငျပါတယျ။ နှုတျခမျးသားစိုပွစေရေနျ ရဓောတျမှာအလှနျအရေးကွီးတာကွောငျ့ တဈနလြေှ့ငျ ရေ 8 ဖနျခှကျ (2 လီတာ)ထိသောကျသုံးသငျ့ပါတယျ။
ဟငျးသီးဟငျးရှကျနဲ့ အသီးအနှံတှမြေားမြားစားပေးဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။ ဗီတာမငျ E နဲ့ ဗီတာမငျ B တို့ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ ထောပတျသီး၊ သင်ျဘောသီး၊ ကီဝီနဲ့ ဘယျရီသီးတှေ စားပေးခွငျးဖွငျ့ နှုတျခမျးသား အသားအရညျလှပလာမှာဖွဈပါတယျ။
မကွာခဏအစိုဓာတျဖွညျ့ဆညျးပေးပါ။ နှုတျခမျးအဆီတောငျ့ကို ပိုကျဆံအိတျထဲအမွဲထညျ့ထားပွီး လေးနာရီတဈကွိမျလောကျ ဆိုးပေးခွငျးဖွငျ့ နှုတျခမျးသားကိုစိုပွစေရေုံမြှမက နှုတျခမျးသားမဲခွငျးကိုလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
2. လြှာဖွငျ့သပျခွငျး (သို့) ကိုကျခွငျးမြားမပွုလုပျပါနှငျ့
လုံးဝမကောငျးတဲ့အမူအကငျြ့ဖွဈတဲ့အပွငျ နှုတျခမျးကိုကျခွငျးဖွငျ့ နှုတျခမျးသားကို ကှဲစရေုံသာမက နှုတျခမျးသားပါမဲလာပါလိမျ့မညျ။ လြှာဖွငျ့သပျခွငျးကွောငျ့လညျး နှုတျခမျးသားခွောကျသှစေ့နေိုငျပါတယျ။
3. စြေးပေါသော အလှပွငျပစ်စညျးမြားကိုမသုံးစှဲပါနှငျ့
စြေးသကျသာတဲ့နှုတျခမျးနီတောငျ့တှဟော နှုတျခမျးသားကိုမဲ၍ ခွောကျသှစေ့နေိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စိတျခယြုံကွညျရတဲ့ တံဆိပျမြိုးကိုသာ ရှေးခယျြသုံးစှဲသငျ့ပါတယျ။
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါကို သက်သာစေတဲ့ ပန်းမုန်လာစိမ်း...
နှုတ်ခမ်းသားနူးညံ့စိုပြေ၍ ပန်းနုရောင်သမ်းနေစေရန် နည...
အသက်ကြီးလာချိန်မှာ နေရောင်ခြည်က ကျန်းမာရေးအကျိုးကေ...
မျက်နှာအလှအပအတွက် face lift လုပ်နည်း
အလှ အပ များအတွက်လည်း အသုံးဝင်တဲ့ ကော်ဖီ
မနက်စာကို မဖြစ်မနေ စားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း ၅ချက်
သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတတ်မှန်း သင်မသိသေးတဲ့ ပစ္စည်းများ
ဂျင်းစားဖို့ မသင့်တော်တဲ့ လူ ၄မျိုး
သံပုရာစိတ်လေး တစ်စိတ်ထဲမှာ ဘက်တီးရီးယားပေါင်း ဘယ်ေ...
အမျိုးသားများမှာ ပိုဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ရောဂါအခြေအနေ 8 မ...
နွားနို့သောက်သုံးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများတွင် အရိ...
အဆင်းလှပြီး အရသာ ရှိတဲ့ မုန်လာဥနီ
အသီးအနှံကို ဘယ်အချိန်မှာ စားဖို့ အကောင်းဆုံးလဲ
စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအနေနဲ့ မိခင်သာမက ကလေ...
ဆေးလိပ်သောက်သက်တမ်း နှစ် ၃၀ ကျော်ရင် သင့် DNA ပြော...
ဆံပင်တွေဖြောင့်စင်းနေအောင် အပူချောင်းမသုံးပဲ ဒီလို...
ကားကြာကြာ စီးရတော့မယ်ဆိုရင် မစားသင့်တဲ့ အစားအစာမျာ...
သိသင့်သိထိုက်တဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေရဲ့ အန္တရာယ် 10 ချ...
ဆံပင်အတို ညှပ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်မှု ရိ...
သက်တမ်းကုန်ဆုံးတတ်မှန်း ကျွန်ုပ်တို့ မသိကြတဲ့ တွေ့...
အရေပြားပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အကြောပြတ်ခြင်းများကို...
မျက်နှာမှာ ပေါက်တဲ့ အမွေးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့..
သင့်ကို စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေမယ့် အစားအစာများ
အရောင်၊ အနံ့ပါတဲ့ အိမ်သာစက္ကူတွေကို ဘာ့ကြောင့်မသုံး...
သင် ဈေးကြီးပေးဝယ်ထားရတဲ့ အလှကုန်တွေထဲ ဘက်တီးရီးယာ...
သင့်ကို လူတွေ ချက်ချင်း စိတ်ပျက်သွားစေနိုင်သည့် အခ...
ကိုယ်အလေးချိန် ကျစေဖို့ ညမအိပ်ခင် သောက်ရမယ့် ဖျော်...
အသည်းကို ကျန်းမာစေမယ့် အရည် ၃မျိုး
သင့်အိမ်ခန်းအတွင်း နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေရန်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက် ကိုယ်အလေးချိန် ဘယ်လိုပြန်ချ...
ကလေးတွေ ဘယ်အရွယ်မှာ စပြုံးတတ်ကြသလဲ?
ထောပတ်သီး ဘာကြောင့် စားသင့်သလဲ
အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာမဆို နုပျိုလှပနေစေဖို...
အမျိုးသမီးတိုင်း သိသင့်တဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ အခြေခံကျတဲ...
ကလေးများ ဆော့ကစားရာမှ ရရှိသောဒဏ်ရာများကို ကုသခြင်း...
အသွင်သစ်နဲ့ မျက်နှာအနေအထား ပြောင်းလဲသွားစေဖို့ ဒီအ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ သိလေ့မရှိတဲ့ အချက် (၁၀)...
တစ်နေကုန် ဗိုက်ဆာနေခြင်းဟာ ဒီအရာတွေကြောင့်သာဖြစ်
ကလေးငယ်တွေ အတွက် ကျန်းမာစေမယ့် မနက်စာ ၅မျိုး